दाजु ब’हिनीको प्रे’म र अ’नैतिक स’म्बन्धले निम्त्याएको घ’टना ! – Khabarhouse
दाजु ब’हिनीको प्रे’म र अ’नैतिक स’म्बन्धले निम्त्याएको घ’टना !
Khabar house | ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १६:०२ | Comments
चितवन, साउन ८ : सुजिता भण्डारी मृ,त्यु प्रकर’णमा प्रहरीले एक जनालाई प’क्रा उ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मृ,त’क सुजिताको ठुलबाबाको छोरा पर्ने सचिन भनिने सुकदेव भण्डारीलाई प’क्रा उ गरिएको जानकारी दिएको छ । सुजिता मृ,त्यु प्रक’रणका अनुसन्धान अधिकृत डिसएपी इन्द्रबहादुर रानाले आ’त्म’ह त्या दुरु’त्सा’हन मु’द्दामा सुजिताको दाईलाई प’क्रा उ गरिएको जानकारी दिए ।
उनलाई काठमाडौंबाट हिजो बिहीबार प’क्रा उ गरिएको हो। सुजितालाई आ’त्म’ह त्या गर्न बा’ध्य पारिए को भन्दै आमा अम्बिका भण्डारीले ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सुकदेवको नाम किटान गरेर मु’द्दा दर्ता गरेकी थिइन्। रानाका अनुसार सुकदेव विरु’द्ध ज्या’न सम्बन्धि क’सुर अन्तर्गत ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरि’वाना हुन सक्नेछ। झापाको झापा गाउँपालिका– ६ शरणमतिका २३ वर्षीय सुकदेव र सुजिता बीच विवाह गर्ने सम्मको तयारी भएको खुलेको डिएसपी रानाले जनाए । उनीहरु विदेशमा पुगेर विहे गर्ने सोचमा रहेको पाइएको रानाले बताए ।
डीएसपी रानाका अनुसार असार ९ गते सुजिताले वि’वाह गर्न प्रस्ताव गरेपछि यी दुई बीचमा वि’वाद सृजना भएको थियो। त्यसपछि असार ११ गते सुजिता बेप’त्ता भएकी थिइन् । उनी बेपा’त्ता भएको दश दिनपछि असार २० गते घर नजिकैको सामुदायिक वनमा मृ,त भेटिएकी थिइन् । सुजिता बेप’त्ता भएको दिन दिउँसो फोन गरेर आफू अ’पह रणमा परेको भनेर सुजिताले आफूलाई बताएको दिदी कविताले बताउँदै आएकी छिन् ।